विकासको जग बसाएका राणाहरु : सडकदेखि पुल निर्माणसम्म, यस्ता थिए विकासहरु (स्मरणरिपोर्ट) - Suvham News
विकासको जग बसाएका राणाहरु : सडकदेखि पुल निर्माणसम्म, यस्ता थिए विकासहरु (स्मरणरिपोर्ट)
पृथ्वी नारायण शाहको पूर्वी नेपालको कोशी क्षेत्रको विजय अभियानमा कास्की र लमजुङका कुन्वर क्षेत्रीहरुले अधिक मात्रामा भाग लिएका थिए । यसैकारण जंगबहादुरले आफूलाई कास्की र लमजुङका महाराज घोषित गराएका थिए । त्यसपछि राणा प्रधानमन्त्रीहरु श्री ३ महाराज कहलिन थाले । पूर्वी विजयपछि पृथ्वीनारायण शाहले रामकृष्ण कुवँरलाई प्युठान पठाए । त्यहाँ उनले बारुदखाना तयार गर्न लगाउँदै गर्दा सन् १७७१ मार्च २१ मा उनको मृत्यु भयो । मृत्युपछि उनका १८ वर्षिय छोरा रणजित कुँवर जुम्लाका नवविजित हाकिम नियुक्त भए । त्यहाँ शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न सफल भएकाले उनलाई चारकाजीमध्येको एक काजी बनाइयो । रणजित कुवँरका तीन भाई छोरा थिए : बालनसिंह कुँवर, बलराम कुँवर र रेवन्त कुवँर । रणबहादुर शाहका हत्यारा शेरबहादुर शाहलाई सहि मौकामा मारेबापत बालनरसिंह कुँवर काजी बनाइए । उनको मान र जागि उनका उत्तराधिकारीहरुले पनि पाउने भए । सन् १८१४ को डिसेम्बर महिनामा उनको मृत्यु भयो ।
नेपालमा १ सय ४ वर्षसम्म राणा शासन रह्यो । राणा शासनमा जनताको अधकार कुण्ठित भएको भन्दै २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याइयो । प्रजातन्त्रका लागि लड्दा धेरै योद्धा शहिद भए । प्रजातन्त्रको उदयपछि जनता स्वतन्त्र भए । यद्यपि, आर्थिक समृद्धिका हिसाबले प्रजातन्त्र पश्चात खासै उपलब्धी भएको देखिँदैन । मुलुकको संरचना परिवर्तनमा मात्रै ध्यान दिनाले आर्थिक मुद्धाहरु ओझेलमा परेको भान हुन्छ । राणा शासनको १०४ वर्षलाई हेर्ने हो भने राणा प्रधानमन्त्रीहरुले नेपालको आर्थिक समृद्धिका थुप्रै योगदान पुर्याएको प्रष्ट हुन्छ ।
राणा प्रधानमन्त्रीहरु र तीनीहरुका मूख्य योगदान :
जंगबहादुर राणा : वि.सं. १९०४ देखि १९३३ सम्म जंगबहादुर राणाले नेपालमा शासन गरे । आफ्नो शासनकालमा उनले मुलुकको विकासमा थुप्रै योगदान पुर्याए । उनले वि.सं. १९०८ सालमा पसहिला्पटक न्याय व्यवस्था तथा अपराध कानुन तोकिएको मुलुकी ऐन जारी गरे भने १९१० मा दरबार स्कुलको स्थापना गरि शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याए ।
रणोद्धीप मल्ल : नेपालमा सबैभन्दा पहिले पात्रो प्रकाशनको सुरुवात गर्ने रणोद्धीप मल्लले १९३३ देखि १९४२ सम्म शासन गरे । मालपोत उठाउने नयाँ बन्दोबस्त उनैको पालामा सुरु भएको थियो ।
वीर शमशेर : वि.सं. १९४२ देखि १९५७ सम्म शासन चलाएका वीर शमशेरले भादगाउँ र काठमाडौँमा वीरधाराको व्यवस्था गरे । साथै, विभिन्न पुलहरुको निर्माण, वीर पुस्तकालयको निर्माण, घण्टाघरको निर्माण आदिमा उनको योगदान रहेको छ । वि.सं. १९७४ मा वीरअस्पतालको स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री पनि वीर शमशेर नै हुन् ।
देव शमशेर : १९५७ देखि १९५८ सम्मको एक वर्षको शासनअवधिमा पनि देव शमशेरले मुलुकलाई थुप्रै योगदान पुर्याए । गोरखापत्र प्रकाशनको प्रारम्भ गर्ने देव शमशेरले १० देखि ५ बजेलाई सरकारी समय भनि निर्धारण गरेका थिए । त्यस्तै, सरकारी विदाको व्यवस्था ल्याउन प्रधानमन्त्री समेत रहेका देव शमशेरले मुलकमा थुप्रै पाठशालाहरुको स्थापना गरेका थिए ।
चन्द्र शमशेर : सतिप्रथा र दास प्रथाजस्ता कुप्रथाको अन्त्य गरेका राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले १९५८ देखि १९८६ सम्म शासन चलाए । आफ्नो शासनकालमा उनले नेपालमै पहिलोपटक विजुली वत्ति भित्र्याए । नेपालकै पहिलो कजेज त्रिचन्द्र कलेज स्थापना गरेका चन्द्र शमशेरकै पालामा गोरखा भाषा प्रकाशनी समितीको स्थापना भएको थियो भने रेलवेको विकास पनि चन्द्र शमशेरकै पालमा भएको थियो । त्यस्तै, नेपालको नक्सा निर्माणमा समेत उनका् ठूलो योगदान रहेको छ ।
भीम शमशेर : १९८६ देखि १९८९ सम्मको शासनकालमा भीम शमशेरले नुन र कपासमा भन्सार माफी दिलाए भने उनको शासनकालमा कपास खेतीलाई एकदमै प्िरोत्साहन गरिएको थियो ।
जुद्ध शमशेर : वि.सं. १९८९ देखि २००२ सम्म जुद्ध शमशेरले शासन गरे । सो समयमा नेपालकै पहिलो बैँक नेपाल बैँकको स्थापना भयो । घरेलु उद्योगको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका जुद्ध शमशेरको शासनकालमा उच्च अदालत, दमकल, संग्रहालय र चिडियाखानाको स्थापना भएको थियो ।
पद्म शमशेर : २००२ देखि २००५ सम्म शासन गरेका पद्म शमशेरको पालामा नेपालकै पहिलो संविधान बनेको थियो । साथै, काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थापना समेत पद्म शमश्रकै पालामा भएका् थियो ।
मोहन शमशेर : २००५ सालदेखि २००८ सालसम्म शासन गरेका मोहन शमशेर अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री हुन् । उनका पालामा आकाशवाणीको स्थापना भएको थियो । साथै, राष्ट्रिय आर्थिक समितीको गठन पनि मोहन शमशेरकै पालामा भएको थियो ।
Prevचर्को स्वरमा बाजा बजाउदा विहेमा गोली चल्यो, दुई घाइते
Nextमुगुमा मोटर बाटो निर्माणमा तिब्रता